Healthy Habit – Page 32 – Healthy Life Journal
အိပ်စက်မှုပြဿနာ ဖြေရှင်းပါ . . .
…၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊… Q. အိပ်စက်မှုပြဿနာဖြစ်တာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ HninHnin(FB) A. အိပ်စက်မှုပြဿနာကို လမ်းညွှန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ BEARS ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ B: Bedtime problems? အိပ်ရာဝင်ချိန်...
ကလေးတွေကို ဘာကြောင့် ပုံမှန်ပွေ့ဖက်ပေးဖို့ အရေးကြီးတာလဲ ….
……………၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊…………… သင့်ကလေးကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ပွေ့ဖက်ပေးပါ။ ပွေ့ဖက်ပေးတာက စိတ်ခံစားချက်ကောင်းစေပြီး ကလေးကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါတယ်။ ကလေးတွေကို ပွေ့ဖက်ပေးတာကြောင့် ကြီးလာတဲ့အခါ ကြင်နာတတ်ပြီး ကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးသားကို မျှဝေတတ်လာတယ်၊ လူတွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့သံယောဇဉ်ကို ဖန်တီးတတ်လာပါတယ်။ ပွေ့ဖက်ခြင်းက...
အိမ်မှာ ကြောင်လေးတစ်ကောင် မွေးထားတာက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုကောင်းမွန်စေနိုင်သလဲ
……………၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊…………….. လူအများစုက ကြောင်လေးတွေကို သိပ်ချစ်ကြပြီး အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ကြောင်လေးတွေနဲ့ နာရီပေါင်းများစွာ အတူကစားကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကြောင်လေးတစ်ကောင်ရှိတာက လူတွေရဲ့ဘဝကို ပိုကျန်းမာစေပြီး ပိုပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အခုလိုမျှဝေပေးထားပါတယ်။ (၁) ကြောင်တွေက အရိုးတွေ၊ အရွတ်တွေနဲ့...
—————-၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—————– Q. ဘယ်လောက်အိပ်ရင် လုံလောက်ပါသလဲ ဆရာ။ DawMay(FB) A. အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအများစုဟာ တစ်ညအိပ်ချိန် ၈-၉ နာရီ လိုအပ်ပါတယ်။ အသက် ၁-၅ နှစ်အတွင်း ကလေးတွေက...
————-၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————— အသက်ရှူတဲ့အခါမှာ အခြေခံကျတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ အသက်ရှူသွင်းတာနဲ့ အသက်ရှူထုတ်တာကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်တာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ဝ၀ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်တာက စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အားအင်တွေ ရရှိစေပါတယ်။ အသက်ရှူတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ကို စူးစိုက်ထားရှိတာဟာ အာရုံစူးစိုက်အားကောင်းတာ၊ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိတာ၊...
အသည်းအဆီဖုံးက ဝလို့ဖြစ်တာလား . . .
———-၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊———– Q. အသည်းအဆီဖုံးရောဂါက ဝလို့ဖြစ်တာလား။ ဆေးမစားဘဲ အစားအစာရှောင်လို့ရပါသလား။ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ A. အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ (Fatty Liver) အဖြစ် များတဲ့သူတွေကတော့ အရက်သောက်တဲ့သူတွေရယ်၊...
မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေရန် တစ်နေ့တာအတွင်း အချိန်နာရီအလိုက် ဆောင်ရွက်သင့်သည်များ
————-၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊————— တစ်နေ့တာအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲက စွမ်းအင်ကသာ အချိန်နဲ့အမျှ အတက်အကျပြောင်းလဲနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ရဲ့ဦးနှောက်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်စည်းချက်ကျနမှု လိုအပ်နေပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနရီ၊ အိပ်စက်မှု၊ အလင်းနဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတို့အပေါ်မှာ အကြီးအကျယ် မှီခိုနေပါတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းအောင်...
ဓာတုပစ္စည်းကင်းစင်ပြီး အသားအရေကြည်လင်စေမည့် မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း ၆ နည်း
————–၊ လရိပ်မေ ၊————— မျက်နှာကို ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ ပေါင်းတင်ဆေးတွေက တည့်မှတည့်ပါမလားလို့ စိုးရိမ်နေကြသူတွေအတွက် ဓာတုပစ္စည်းကင်းဝေးပြီး သင့်မျက်နှာကို ဝင်းပသွားစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ငှက်ပျောသီးဖြင့် ပေါင်းတင်နည်း သင့်အသားအရေက ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာစိုပြေတင်းရင်းသွားအောင် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးကိုသုံးပြီး ပေါင်းတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။...
အသက် ၃၅ ကျော် အရွယ်တို့အတွက် အာဟာရ
————–၊ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊————— အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က မျှခြေတွေ အနည်းငယ်မညီညွတ်တာတွေအပြင် ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေကလည်း အနည်းငယ်ချို့ယွင်းလာပါပြီ။ အသက် ၅၀-၆၀ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ ငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကတည်းက ကျန်းမာရေးမလိုက်စားခဲ့လို့ အခြေခံဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ရောဂါတွေက ဒီအရွယ်မှာ ပိုသိသာလာစေပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ...